Dagaal xooggan oo ciidanka dawladda iyo Al-shabaab ku dhexmaraya magaalada Garbahaarey, Gedo. – Radio Daljir
Maajo 2, 2011 12:00 b 0
Garbohaarey, May, 02 – Dagaal culus oo la isu adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka ayaa ka socda magaalada Garbahaarey ee xarunta gobolka Gedo, halkaas oo saaka laga maqlayo dhawaqa madaafiicda ay laba dhinac is dhaafsanayaan.
Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay idaacadda Daljir in dagaalku khasaare nafeed geystay ayna madaafiic ku habsatay guryo ay daganyihiin dad shacab ah, balse ay adagtahay in hadda la ogaado khasaaraha dhabta ah ee dagaalku gaystay maadaama uu wali socdo.
Dagaalka ayaa bilawday xalay saqdii dhexe ka dib markii ciidanka Al-shabaab ay weerar labo jiha ah ku qaadeen magaaladan oo todobaadkii hore gacanta u gashay ciidanka dawladda oo taageero ka helaya Ahlu-sunna Waljameeca.
Boqolaal ka tirsan dadwaynaha ku dhaqan magaaladaasi ayaa ka qaxaya saaka, si ay uga baxsadaan dagaalka dawladda iyo Al-shabaab dhexmaya. Wixii warar ah ee ku soo kordha arrintaasi kala soco Daljir.Com
Dagaal ka dhacay gudaha magaalada Garbahaarey, Gedo.
Garbahaarey, May 02 – Dagaal qadhaadh ayaa tan iyo saaka ka socda daafaha iyo qayb ka mid ah gudaha magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo, dagaalkan ayaa u dhexeeya xoogagga Ahlusunna Waljamaaca oo ay isgarabsanayaan ciidamada dowladda iyo ururka Alshabaab oo ay iska soo horjeedaan, maalmo ka horna ay magaaladaas ka qabsadeen.
Dagaalka manta ayaa dhacaya markii ay Alshabaab weerar ballaadhan magaaladaas ku soo qaadeen, kaddib dagaal shalay iyo darraad ka dhacayay meel magaaladaas u jirta qiyaas 30km.
Dagaalka ka dhacaya Garbahaarrey waxa uu ku beeganyahay xilli dhammaan xoogaggii Alshabaab ee joogay degmooyinka Bardaale iyo Xuddur ee gobollada Baay iyo Bakool, degaannadaas oo meelo u dhowna ay imika isku kulaalayaan ciidamada dowladda iyo Alshabaab, inkasta oo wararku ay sheegayaan in badiyaa Alshabaab ay ciidamadoodii dib ugu celiyeen magaalada Baydhabo oo u aha xarun wayn marka loo eego gobollada koonfureed ee dalka.
Xoghayaya Gaashaandhigga ee Ahlusunna Waljameeca ee gobolka Gedo Isxaaq Mursal oo u warramayay idaacadda Daljir ayaa sheegey in dagaalku uu ka dhacayay qayb ka mid ah gudaha magaaladaas, isla markaana ay Alshabaab Garbahaarrey weerar ku soo qaadeen.
Gobollada Bay, Bakool, Gedo, iyo Jubbooyinka oo ahaa gobolladii ay ugu taagta roonaayeen alShabaab ayaa imika ah degaanno ay colaado ka dhan ah Alshabaab ka aloosanyihiin
Baahin: Axad, May 01, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Warbixin ay QM ka soo saartay xaalada Somaliya; Prof. Maxamed Xareed Cali ayaan ka waraysanay … Taliyihii ciidanka AMISOM ee Somaliya ee la badelay oo la sagootiyey, taliyaha cusub oo la soo dhaweeyey; M/weyne Shariif oo ka hadlay … Shir lagu gorfeeyey isk-horimaadkii ka dhacay xaafada Garsoor oo ka dhacay madaxtooyada Galkayco … Maalinta shaqada & shaqaalaha aduunka oo laga xusayo Puntland; Indha-gurad, wasiirka shaqada & shaqaalaha ayaa ka waraysanay …